Tiri kuda ropa: Parirenyatwa – Makuhwa.co.zw
Tiri kuda ropa: Parirenyatwa
GURUKOTA rezveutano nekurerwa kwevana, Dr David Parirenyatwa, vanokurudzira veruzhinji kuti vape ropa senzira yekuderedza matambudziko ekushomeka kwaro munyika, zvikuru kuNational Blood Service Zimbabwe (NBSZ).
Dr Parirenyatwa vakataura izvi svondo rapera mumashoko avakaverengerwa nemunyori mukuru mubazi iri, Dr Gerald Gwinji, pamusangano wakaitwa neNBSZ uyo waive wakananga kutsvaga nzira dzekuvandudza kupa ropa munyika.
“Ropa chinhu chakakosha munyaya dzeutano uye zvipatara hazvingakwanisi kuita basa nemazvo kana risipo. Tinoda kuti ropa rakanaka rinenge rakavhenekwa nemichina richipihwa kuvarwere kuitira kuti tideredze kutapurirana kwezvirwere nekudaro sangano reNBSZ rinofanira kutsigirwa nemari yekutenga zvekushandisa mukutorwa kweropa kuvanhu pamwe nekuvhenekwa kwaro,” vanodaro Dr Parirenyatwa.
“Ropa rinodiwa zvikuru muutano hwevanhu, zvikuru apo vanhukadzi vanosungunuka, kuvhiiwa kana kuti pachinge paitika tsaona.”
Vanoti sangano reNBSZ rakanyoreswa zviri pamutemo uye rakapihwa magwaro ekushanda zvakanaka eISO Certification gore rapera.
“Ropa riri kuramba richidhura muzvipatara asi tinofanira kuziva kuti tirambe tichiita zvinhu mugwara varwere vanofanira kuwaniswa ropa rakachena. Mugore ra2010, sangano reNational AIDS Council rakabatsira nemidziyo yekuvheneka ropa, UNICEF yakabatsirawo madzimai akazvitakura ayo aida rubatsiro rweropa panguva yekusununguka uye sangano reEuropean Union rave nemakore anodarika 20 richibatsira NBSZ. SeHurumende tinofanira kutsigira NBSZ nemari kuitira kuti mutengo weropa uderere,” vanodaro.
NBSZ iri kuedza kuunganidza mari yehomwe inotsigira mabasa ekupa ropa nekuchengetedzwa kwaro kuburikidza nemitambo yegolf ichaitwa nomusi wa1 Kubvumbi gore rino paRoyal Harare Golf Club. Vane chinangwa chekuunganidza $50 000.
Nekune rimwe divi, bazi rezveutano riri kuitawo mitambo yekutsvaga mari, yeCar Raffle Campaign.
Kuburikidza nemakwikwi aya, pari kutarisirwa kuunganidzwa mari inosvika $200 000, imwe yacho ichabatsira varwere vari kukundikana kutenga ropa.
Sachigaro weNAC Board, VaEvaristo Marowa, vanoti sangano ravo rine shungu dzekuti varwere vawaniswe ropa rakavhenekwa senzira yekurwisa zvirwere zvepabonde seHIV, syphilis, hepatis B neC.
VaMarowa vakataura mashoko aya apo vaitambidza NBSZ rutsigirwo rwe$403 000.
Mukushi wemashoko kuNBSZ, Muzvare Esther Massundah, anokurudzira veruzhinji vane Blood Group O kuti vape ropa zvakanyanya nekuti mhando yeropa iri riri kunyanya kudiwa muzvipatara.
“Vanhu vane Blood Group O vanokwanisa kupa ropa kuvanhu vose vakasiyana, ndiko kusaka ropa ravo richidiwa zvakanyanya,” vanodaro.
Pari zvino muzvipatara zveHurumende paindi rimwe chete reropa riri kuita $135 kubva pa$80 apo muzvipatara zvakazvimiririra richiita $161 uye mitengo iyi yakadzikwa neHurumende.
Related Topics:Dr David ParirenyatwaGURUKOTA rezveutano nekurerwa kwevanaNational Blood Service Zimbabwe
Nyoka yababa ine musoro wemunhu’ . . . ‘Zvose maziso nemuromo’ . . . Inondiita mukadzi: Muroora
Shock in Nyanga as mountain mysteriously disappears, water in river turns into blood